Khad cusub oo lagu kala sooci karo baradhada ayaa laga dhex dhisay Urals – Magazine System
Bogga guriga News Wararka gobolka
Khad cusub oo lagu kala sooci karo baradhada ayaa laga dhisay Ural
в Agrotechnology, Sayniska, News, Aruurinta keydinta, Wararka gobolka, Injineerinka / Teknolojiyada
Iyada oo qayb ka ah cilmi-baarista mashiinka kaydinta iyo kala-soocidda baradhada, saynisyahano ka tirsan YuUNIISK, oo ah laan ka mid ah Xarunta Cilmi-baarista FGBNU Urfa ee Laanta Ural ee Akadeemiyada Sayniska ee Ruushka, ayaa sameeyay qorshe lagu raro mashiinnada kala-soocidda Nooca M-616, adeegga saxaafadda ee xarunta sayniska ayaa sheegaysa.
Rakibaadda waxaa ka reeban rarista gacanta ee baanka Daah-furka mashiinka kala-soocidda ee wax-ka-beddelka ah ayaa suurtageliyay in kor loo qaado tayada iyo xawaaraha kala-soocidda baradhada, la yareeyo dadaalka jireed, halka wax soo saarka shaqadu uu kordho 5-10%.
Sida waafaqsan GOST "Badhatada abuur. Tilmaamaha" baradhada shinnida ee qaybta iniinaha asalka ah waxaa lagu kaydiyaa weel ama maro, laga nadiifiyey cayayaanka iyo cudurrada. Habka kaydinta weelka, hawo hufan oo isku mid ah ee alaabada ayaa la bixiyaa iyadoo la raacayo dhererka oo dhan ee xirmada weelasha. Tani waxay hubinaysaa nolosha ugu badan ee alaabta iyada oo aan tayada lumin. Intaa waxaa dheer, habkan kaydinta ayaa si weyn u yareynaya khatarta dhaawaca alaabta inta lagu jiro hawlgallada rarka iyo dejinta.
Xilliga gu'ga, ka hor intaan la beerin, baradhada abuurka waa la kala soocaa oo la qiyaasaa, loo qaybiyaa jajab iyadoo la adeegsanayo mashiinnada kala-soocidda, tusaale ahaan, kala-soocidda nooca M-616. Rakibadu waxay ka reebaysaa ku shubista gacanta ee majarafad la gelinaya kaydka mashiinka kala-soocidda M-616. Mugga aaladda lagu shubayo bakhaarku waa 50% ka weyn mugga weelka. Baabuurka korantada, weel ay ku jiraan baradho ayaa lagu rakibay meel ka sarraysa qalabka wax lagu qaato. Marka daboolka la sii daayo, weelka guntiisa hoose ayaa furma. Digriiga waxaa lagu shubaa qalabka wax lagu qaato. Digriiga, rogroga, waxay ku dhacaan hopper-ka kala-soocidda. Nooca qalabka si toos ah looga soo dejiyo hopper-ka kala soocida weelasha lagu kaydiyo baradhada abuurka ayaa la sameeyay oo la tijaabiyay rakibaadda.
ТSidee u shaqeeyaa mashiinka kala-soocidda?
Source: FGBNU UrFANITS UB RAS
Tags: mashiinka kala-soociddakala soocida baradhadaUral
ShareShare47Share33Si aad u soo diri
Qiyaastii 500 milyan oo rubi ayaa lagu jihayn doonaa dagaalka ka dhanka ah hogweed ee gobolka Moscow 2019
Yaraanta baradhada ayaa ku jirta Ukraine: maxay noqon doontaa qiimaha iyo sida loo beddelo khudradda